Higaadda iyo Naxwaha Hubi Naxwaha | Martech Zone
Hadaad akhriste ahayd Martech Zone in muddo ah, waad ogtahay inaan xoogaa caawimaad ah ugu isticmaali karo waaxda tifaftirka. Maaha inaanan dan ka lahayn higgaadinta iyo naxwaha, aniga ayaa daneeya. Dhibaatadu waa mid caado u ah. Muddo sanado ah, waxaan qoraayay oo daabacayay maqaalladayada duulimaadka. Ma maraan talaabooyin badan oo oggolaansho ah - iyaga ayaa la baaray, la qoray, lana daabacay.
Nasiib darrose, taasi waxay igu dhalisay xoogaa xishood ah maadaama aan daabacay qaar lagu qoslo khaladaadka naxwaha sanadihii la soo dhaafay. Xitaa waxaan la hadlay qaar ka mid ah qorayaasheena daabacaadda oo ku saabsan haysashada iyaga si ay dib ugu eegaan qoraalladayda maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, ma doonayo inaan sugo inaan daabaco markaa dib ayaan u dhigay. Ma aha in aan ku xuso xaqiiqda ah in aanan jeclayn sida ay talooyinkoodu u beddelaan codka shaqada. Si daacadnimo ah ayaan uga fogaaday inaan maro dariiqa tafatirka. Sidoo kale, waxaan qoraa maqaallo aad u tiro badan oo aan u baahanahay inaan ku hagaajiyo amarkayga luqadda Ingiriiska.
Imisa Naxwaha iyo Hingaadda qaladaadka ay dadku ku sameeyaan khadka tooska ah?
Kaligay maahan! Naxwe ahaan falanqeeyay in ka badan hal bilyan oo erey dib u aqrin ku sameysay barnaamijkooda qorista ee caanka ah muddo bil ah. Waa tan waxa ay heleen:
Dadku waxay sameeyeen celcelis ahaan 39 qalad 100kii erayba qoraallada baraha bulshada. E-maylku waxay raacaan 13 qalad 100kii eray ee qoraalada blogka ayaa ugu hooseeya oo leh 6.5 qalad 100kii ereyba.
Dadku saddex jeer ayey u badan tahay inay qaladaad ku qoraan qoraalada warbaahinta bulshada marka loo eego kuwa aan ku jirno nooc kasta oo kale oo qoraal ah oo khadka tooska ah ah. Waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ah tan ay tahay inay ku xirnaato xaddidaadda Twitter-ka (waxna laga beddeli karin) iyo dabeecadda wadahadalka ee warbaahinta bulshada.
Shimbiraha hore ee wax qoraya inta udhaxeysa 4:00 am iyo 8:00 am (Ah-oh)
Waa Maxay Naxwaha ugu sareeya iyo Qaladaadka Higaad ee dadku ku sameeyaan khadka tooska ah?
Khaladaadka Rasuullada (tusaale, aan vs. ogolaan)
Sidoo kale vs. Ku
Maalin kasta vs. Maalin walba
Waxaa vs. waxay
badan vs. Markaasuu
Waxaa laga yaabaa inaad aragto xoogaa horumar ah oo ku saabsan aaggan, maadaama aan maal-galiyay liisanka sanadlaha ah Grammarly, adeeg inta badan loogu magac daray hubiyaha naxwaha adduunka ugu fiican. Ku buuxi balaadhinta biraawsarka, waxaan si dhakhso leh u qori karaa oo aan u sixi karaa khaladaadka aniga oo aan waligay ka tegin tifaftiraha.
Naxwe ahaan: Nadaamka Naxwaha iyo Higaadda Ugu Fiican
Grammarly waa adeeg aan kaga faa iideysan karo madal ama softiweer kasta. Waa kuwan tusaalooyin:
Tifatiraha Naxwaha - Tifaftiraha Grammarly waa mid cajiib ah, oo leh higaadis, baaritaanka naxwaha, jeegaga khayaanada, talooyinka dhagaystayaasha, hubinta qaab-dhismeedka, akhrinta, ogaanshaha codka, ujeedka, gooldhalinta guud, yoolalka, soo-jeedinta ereyada, beddelaadda xarrago leh, tirinta ereyada, dhererka jumlada, iyo in ka badan.
Naxwe Naxdin App - Grammarly wuxuu leeyahay codsi kaligiis ah oo ku shaqeyn kara nidaam kasta oo qalliin. Waa barxad ku saleysan websaydh halkaas oo aad ku haysan karto bakhaar dhammaan dukumiintiyadaada.
Naxwe ahaan iPad - Grammarly wuxuu leeyahay codsi kaligiis ah oo ku shaqeyn kara iPad-ka.
Kordhinta Browser-ka Naxwaha - Grammarly wuxuu leeyahay kordhin biraawsarro cajiib ah. Waxaan u adeegsanayaa kordhinta Safari hadda gudaha WordPress 'tifaftiraha Gutenberg hadda maqaalkan. Bog kasta oo leh qoraal qoraalka wuxuu si toos ah awood ugu siinayaa Grammarly inuu kaa caawiyo. Iyo tan ugu fiican, waxaad ku heli kartaa shaqeynta aasaasiga ah kharash la'aan!
Ku-darista Xafiiska Naxwaha - Grammarly wuxuu leeyahay xafiis lagu daro Windows ama Mac.
Kiiboodhka Naxwaha - Haddii aad ku jirto aaladda mobilada, waad rakibi kartaa oo aad adeegsan kartaa Keyboard-ka Naxwaha si uu kaaga caawiyo nuqul mobiladaada.
Ganacsiga Grammarly - Shirkaddaadu ma leedahay hagitaanno qaab gaar ah oo gaar ah loo qoro markay wax qorayaan? Ganacsiga Grammarly wuxuu awood kuu siinayaa inaad ku hagto qof kasta oo ka tirsan shirkaddaada inuu raaco tilmaamahaaga.
Bilaw Grammarly Bilaash
Sida Loogu Baadho Naxwaha iyo higgaadinta Cilmiga Naxwaha
Isticmaalka Grammarly waa fududahay. Qeybta qoraalka aad ka shaqeyneyso, waxaad ku arki doontaa arrimaha higaadda iyo naxwaha oo hoosta laga xarriiqay. Guji astaanta Naxwaha oo kor u soo kacaya tifaftire qoto dheer oo leh dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u hagaajiso nuqul kaaga.
Waa kuwan fiidiyow weyn oo ku saabsan sida Grammarly u shaqeeyo:
Haddii taasi aysan kugu filneyn astaamo, sidee ku saabsan emayl toddobaadle ah si aan kuu ogeysiiyo sida wanaagsan ee aad u fulinayso kuwa kale ee isticmaala Grammarly? Haa, mid bay diraan! Iyo maya, ma wadaagayo tayda.
Xusuusin: Waxaan isticmaalayaa tayda Grammarly xiriiriyeyaal xiriir la leh dhammaan boostadan.
Tags: talooyinka dhagaystayaashaqaladaadka higaada macnaha guudqalabka tafatirkaqalabka tifaftirkakhaladaadka 100kii erayhubinta rasmiga ahgoolnaxwahanaxwaha apphubinta naxwahanaxwaha naxwahahubinta naxwahaqalab naxwahanaxwahaujeeddoqalad qaldanguud ahaan dhibcahaJeegaga xatooyadaxarakayntaakhrintahiggaad-higaadhiggaadhigaadahigaada apphigaada higaadaqalab higaadaogaanshaha codkaereyadaerey tiriyaakhaladaadka ereygasoo jeedinta ereyada
Haatan waan tijaabinayaa. Ma jiraan wax tilmaamaya oo sheegaya in la iska indhatiro astaamaha html ee doc ah? Waqtigan xaadirka ah, markii aan qorayo websaydhka, waxaan u qaabeeyaa sida aan u socdo oo naxwaha saxda ah uu leeyahay taam, gaar ahaan markay tahay liisaska.
Iyo, grr, goormuu taageeri doonaa Google Drive?
Haddii kale, waa wax laga naxo.
Google drive wuxuu noqon lahaa muuqaal fiican! Kaliya waxaan ka soo bixinayaa naxwaha dukumintigeyga.